Microsoft ga - eme ọtụtụ puku layoffs gburugburu ụwa Fraịde a | Esi m mac
Microsoft ga-eme ọtụtụ puku layoffs gburugburu ụwa na Fraịde a
Otu n’ime ndị isi nke Apple bụ ịrụ ụka adịghị ya na Microsoft. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, mmekọrịta dị n’etiti ụlọ ọrụ enweela nke ọma ruo n’ókè nke na ha abụọ yiri ka ha na-aga ụkwụ na ụkwụ ruo oge ụfọdụ, ma o doro anya na onye ọ bụla na-agbaso ihe nke ya n’ụzọ ọ bụla.
N'oge ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ Redmond lekwasịrị anya nke ukwuu na ngwanrọ nke ndị ọzọ karịa na onwe ya, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ nke Windows 10 na-amasị ọtụtụ ndị ọrụ, ọ bụghị naanị sistemụ arụmọrụ ka ha ga-achọ na n'ime oge ọbụna ndị aghụghọ “ghọgburu” iji wụnye ya. N'ikpeazụ, Microsoft adịghị mma ya kachasị mma na puku kwuru puku nke layoffs gosipụtara ya.
A ghaghi ikwuputa na ihu oma ha na ihe ha na eme ugbua bu nhazighari nke ulo oru nke hapuru ndi oru aka ka ha mechara, ihe na - akpata karia uru nde dollar weere ụlọ ọrụ ahụ. Ekwentị mkpanaaka nke Microsoft abanyebeghị na ọrụ ahụ ma ugbu a, ha ga-elekwasị anya na ngwanrọ maka kọmputa ha, maka ndị nke OS ndị ọzọ dị ka Apple macOS na nke mbadamba nkume na-agbanyekwa ike.
Fraịde Fraịde a, ụlọ ọrụ ahụ ga-agbakwunye na ogologo layoffs nke afọ ndị gara aga - ihe karịrị 10.000 n'ụwa niile - ọhụụ ọhụrụ nke layoffs, dị ka isi iyi na TechCrunch si kwuo. Mgbanwe mgbanwe na Microsoft nke ga-anwa itinye ụlọ ọrụ n'ihu ndị na-asọmpi ya n'ihe gbasara ọrụ igwe ojii, mpaghara ahụ metụtara Azure ma ga na-arụ ọrụ na ebe a maara nke ọma, Studio, Laptọọpụ na ihe ndị ọzọ. Kpamkpam nnukwu mgbanwe na-emetụta ọtụtụ puku mmadụ n'ụwa nile na nke ahụ na-egosipụtakwa na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ iwepụta ihe ọ bụla na-agaghị erite uru na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Microsoft ga-eme ọtụtụ puku layoffs gburugburu ụwa na Fraịde a
A ga-emezigharị oflọ Ahịa Apple na Fifth Avenue na Nọvemba n'afọ ọzọ
iBus bụ unofficial ngwá ọrụ iji weghachi Apple Watch [vidiyo]